Xikmadda Maanta: “Si aan laguu naqdin oo wax lagaaga sheegin, waxmatare noqo!” – Radio Daljir
Xikmadda Maanta: “Si aan laguu naqdin oo wax lagaaga sheegin, waxmatare noqo!”
Diseembar 12, 2017 10:37 g 0
Ma rabtaa in aan lagu naqdin oo hadana lagu canaanan? Ma rabtaa in aad noqoto waxmatare aan la tirsan? Ma rabtaa in aad dad iyo dal laawe noqoto? Haddii haah, waxba ha dhihin, waxba ha sameyn, oo waxmatare noqo! Hoggaan la’aantu waa tan meesha Soomaali dhigtay e adna safka dheer dhinac ka raac!
Haddii maya, ha lagu maqlo, oo ficilkaaga ha la arko!
Aristotle ama Elbert Hubbard: “Si aan lagu naqdin oo wax lagaaga sheegin, adna waxba ha sheegin, waxna ha sameyn, oo waxmatare noqo!”
Aristotle mise Elbert Hubbard: “To Avoid Criticism, Say Nothing, Do Nothing, Be Nothing!”
Qormooyinka Daljir 41 Wararka 16944